Palestina: Fiara Mpitrongy Tany Israeliana Nahazo Tsiny Noho Ny Fanapahany Ny Fifandraisan-davitra ao Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2011 2:39 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, русский, বাংলা, 日本語, Español, English
Ilay Ejiptiana Mohamed El Dahshan no isan'ny voalohany namoaka ilay vaovao tamin'ny bitsika:
@TravellerW: VAOVAO MAFANA- Nosimbàn'ny fiarabe israeliana mpitrongy tany ny tariby, NY FIFANDRAISANA REHETRA mihitsy – finday, telefaonina mampiasa tariby, aterineto -avy any Gaza! http://t.co/ASIIQ1W #Palestine
Manazava i JalalAK_jojo:
@JalalAK_jojo: Fanamarihana: Efa saika ho adin'ny 6 izao no tapaka tanteraka tampoka ny fifandraisana ao Gaza noho ny nataon'ireo fiara mpitrongy tany Israeliana tamin'ny tambajotram-pifandraisana
Sahiran-tsaina ihany koa ilay mpanao gazety Israeliana Joseph Dana :
@ibnezra: Raha araka ny vaovao eo amin'ny twitter, dia notapahana ny fifandraisana avy any Gaza. Tsy mazava tsara raha i Israel no nanapaka azy.
Avy any Jordania, nojeren'i Ali Abunimah raha afaka mamaky ny hafany ireo Palestiniana namany:
@avinunu: Ry namako any Gaza mahavaky an'ity ve ianareo? Tatitra hoe notapahan'Israely ny fifandraisana amin'ny antso rehetra/aterineto
Maneho olana mitovitovy amin'izany ihany i Benjamin Doherty:
@bangpound: Manamarina ireo namako mpandefa bitsika avy ao Gaza aho ary tsy misy na iray aza niteny na inona na inona tato anatin'ny ora farany…
Ary namaly i Andy Carvin, mpanao paikady ambony ao amin'ny NPR:
@acarvin: @bangpound Fikarohana ifotony ao amin'ny Twitter manodidina an'i Gaza. Tsy dia misy nivoaka. https://twitter.com/#!/search/near%3A%22gaza%22%20within%3A10mi
Avy any Amerika, mandefa bitsika milaza ny andrana nataony hifandraisana amin'ireo telefaona maro mampiasa tariby any Gaza i Darryl Li, fa tsy nahita vokatra.
@abubanda: Nanandrana niantso an-telefaonina tany #Gaza tamin'ny alalan'ny skype aho, isan'izany ny biraon'ny Firenena Mikambana, fa hafatra milaza hadisoana no azo — tsy misy na dia feon-kira aza
@abubanda: Hatreto, izay finday nantsoiko tany #Gaza dia samy manome ny hafatra tsy fandehanan'ny tolotra.
Ary antsasak'adiny aty aoriana, hoy izy manampy:
@abubanda: Mbola tsy mahazo feon-kira foana any #Gaza, afa-tsy ny iray izay tena amin'ny sokajy ambony ao amin'ny biraon'ny Firenena Mikambana (tambajotra sep ?). Efa ho laharana >30, tariby & finday no nandramana.
Mandritra izany, tezitra i Leila ary miantso ny hanaovana hetsika:
@LSal92: Tsy mampino! Tena miezaka ny hanapaka tanteraka an'i Gaza amin'izao tontolo izao i Israely. Aok'izay ny fahanginanareo! Mitenena! #Gaza.
Anaty lahatsoratra fohy, manome tsiny (Ar) ireo fiarabe mpitrongy tany Israeliana ny Maan News noho ireo tariby trangana nitarika fahatapahana.